Undelete iPad: undelete Data on iPad 1/2/3/4/5
> Resource> iPad> undelete iPad: undelete na Nnapụta furu efu Data on iPad
Ọ ga-undelete iPad data?
Na kọmputa, ọ dị mfe ka anyị na-emezi ụfọdụ na-ezighị ezi arụmọrụ mgbe e nwere mkpa. Ị nwere ike iweghachi a ehichapụ akwụkwọ si egweri biini, ma ọ bụ i nwere ike undelete ọdịnaya si a Okwu ya, na ihe ndị dị ka nke ahụ. Mgbe na ihe iPad, ọ ga-undelete data na ya?
N'ozuzu, ị nwere ndabere faịlụ ọ bụrụ na ị synced gị iPad na iTunes n'ihu gị ehichapụ iPad data. Na ikpe, ị nwere ike iweghachi ihe data si iTunes na a mmiri mkpịsị aka. Gịnị ma ọ bụrụ na ị nwere otu? Ma ọ bụ na ị dị nnọọ chefuo mmekọrịta gị iPad na iTunes na ihichapụ dum data? Mkpa ka ị na-enweta ihe iPad data undeleting ngwá ọrụ, ndị ọzọ karịa iTunes.
Na iPad data undeleting ngwá ọrụ, ị nwere ike ozugbo ike iṅomi ka undelete data on iPad, ọbụna na ị na-adịghị nwere ndabere faịlụ. I nwere ike ịgbalị Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac iPhone Data Recovery) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (Windows iPhone Data Recovery). Ha abụọ ka ị undelete data si iPads na ole na ole clicks, gụnyere ehichapụ kọntaktị, ozi, ndetu, kalenda, oku log, ncheta na Safari ibe edokọbara. N'ihi na iPad 1, ị nwekwara ike undelete photos, video, olu memos, wdg
Rịba ama: Iji kpọmkwem Doppler iPad ka undelete data, na Windows version na Mac version dị maka iPad 1/2, The ọhụrụ iPad, iPad na Retina ngosi na iPad Obere.
Ọzọ, ka na-na Mac version nke usoro ihe omume ka a na-agbalị. Ọ bụrụ na ị na-eji Windows version, ị nwekwara ike na-eso nzọụkwụ n'okpuru undelete iPad data n'ụzọ yiri nke ahụ.
Undelete File on iPad 1/2, ọhụrụ iPad, iPad na Retina & iPad Obere
Nke mbụ niile, jikọọ gị iPad ka a Mac na a dijitalụ USB. Mgbe ahụ na-agba ọsọ Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac) na isi window ga-egosi dị ka ndị a. E nwere ihe abụọ mgbake ụdịdị maka gị oke: Naghachi si iTunes ndabere Njikwa, na-agbake site iOS Ngwaọrụ. Mkpa ka ị na-ahọrọ bụbu ebe a, iji undelete faịlụ site na iPad.
Rịba ama: The e mesịrị dị mma maka adịrị iTunes ndabere maka iOS ngwaọrụ na selectively agbake data site na ya.
N'ihi na ihe niile iPads, ma e wezụga iPad 1:
N'ihi na iPad 1:
Nzọụkwụ 2. iṅomi gị iPad ka undelete data site na ya
N'ihi na iPad 1 ọrụ, mkpa ka i soro nkọwa na window n'elu ịbanye scanning mode mbụ, na mgbe ahụ ike iṅomi ya. Ndị ọzọ iPad ọrụ nwere ike ozugbo pịa Malite bọtịnụ na-amalite ịgụ isiokwu gị na ngwaọrụ. N'oge iṅomi, Akwụpụla gị iPad na Mac, ma ọ bụ na Doppler ga-ada na ị chọrọ ime ya ọzọ.
Nzọụkwụ 3. Preview na undelete faịlụ site iPad
Mgbe Doppler, ị nwere ike ihuchalu niile data hụrụ na gị iPad na Doppler N'ihi. Pịa ịhụchalụ ha otu otu. Data e gosiri n'ebe a nwere ndị ka ẹdude na gị iPad na ndị ehichapụ ya. Ma ẹdude data na-ehichapụ data ọ bụla nwere onwe ha agba. Akara ndị ị chọrọ na pịa "Naghachi" ka undelete iPad faịlụ gị Mac.
Iji zere adịkwa data gị iPad, CHETA ndabere ya na kọmputa gị mgbe nile.
Undelete Notes on iPad 1/2, The ọhụrụ iPad, iPad na Retina ngosi & iPad Obere
Otú nyefee music si ochie iPod ka iphone / iPad
Otú nyefee Data si Blackberry ka iPad
Nyefee Photos, Music, Videos na Ọzọ si iPad ka Samsung
Otú nyefee faịlụ site iPad ka Android
Ụzọ dị mfe iji Nyefee Photos si iPad ikuku na kọmputa
Nyefee Music site na kọmputa na-iPad / iPad Obere na na-enweghị iTunes
Olee otú iji tọghata na Ọkụ iPad Video ka DVD